सुतेको पनि तलब पाईने गज्जबको कम्पनी ! - Naya Pusta
सुतेको पनि तलब पाईने गज्जबको कम्पनी !
✍️ नयाँ पुस्ता	 २०७५ मंसिर २० १०:४१ 6
एजेन्सी । कुनै संस्था वा कार्यालयले आफ्ना कर्मचारीलाई काम गरेको तलब दिन्छ । तर, संसारमा कर्मचारीलाई सुतेको पनि तलब दिइन्छ भन्दा तपाईंलाई हाँसो उठ्ला ।
तर, संसारमा यस्तो पनि कम्पनी छ, जहाँ सुतेको र मोजमस्ती गरेको पनि तलब दिइन्छ । यो खबर जापानको हो । जापानको क्रेजी इंक नामक एक कम्पनीले आफ्ना सबै कर्मचारीलाई कार्यालयमै सुत्न अनुमति दिन्छ । र, उसले सुतेको पनि थप पैसा दिन्छ । सो कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीलाई नम्बर दिएको हुन्छ ।
सोही नम्बरअनुसार जो कोही कर्मचारी हप्तामा ५ दिन हरेक रात कम्तीमा ६ घन्टाका दरले सुत्न पाउँछन् । र, सुतेबापत एक कर्मचारीले एक वर्षमा ६४ हजार येन अतिरिक्त तलब पाउँछन् । र, यो पैसा नियमित तलबभन्दा बाहिरको कमाइ हो । क्या मज्जा । अझ रोचक कुरा त यो छ कि, कम्पनीले आफ्ना कर्मचारी मज्जाले निद्रा पुगुन्जेल सुतून् भनेर चेकजाँचसमेत गर्ने गरेको छ ।
कुनै कर्मचारीले पर्याप्त नसुती पर्याप्त सुतेको भनेर ढाँट्न नपाउन् भनेर कम्पनीले एयरवेय नामक एप बनाएर कर्मचारी सुते–नसुतेको अनुगमनसमेत गर्ने गर्छ । यसो किन गरेको भन्नु होला । यो पनि भनिहालौं ।
जापानमा धेरैजसो मानिस धेरैभन्दा धेरै काम गर्छन् । उनीहरू निकै कम समय मात्रै आराम गर्छन् । जसका कारण उनीहरूको स्वास्थ्यमा समस्या देखिने गर्छ । सोही अवस्थालाई ख्याल गर्दै कम्पनीले कर्मचारीलाई सुत्ने वातावरण बनाउन र स्वस्थ राख्न यस्तो जुक्ति निकालेको हो ।
अल्लारे प्रेमले १३ वर्षमै गर्भवती भईन् बालिका !
इरान बम बिस्फोटबाट तीन जनाको मृत्यु